ချမ်ချမ်း | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ချမ်ချမ်း
Category Archives: ချမ်ချမ်း
Chan Chan – Collection
No. Song Title Download 1. အချစ်ထက်မက Download 2. အချစ်ရဲ့သီချင်းသံ Download 3. အကြင်နာအိပ်မက် Download 4. အမုန်းရဲ့နောက်ကွယ် Download 5. အနားမှာရှိပါ Download 6. အဖြည့်ခံ Download 7. အဝေးကပဲချစ်မယ့်သူ Download 8. အဝေးဆုံး Download 9. အရင်ရည်းစားကိုမေ့ပြီပေါ့ Download 10. ဘာတွေပဲဖြစ်ပါစေ Download 11. ဘ၀ချင်းခြားတောင်ချစ်ှမှာ Download 12. ဗုဒ္ဓ သီချင်း Download 13. ချစ်ခဲ့မိတာ Download 14. ချစ်ခွင့်ပေးပါ Download 15. နှလုံးသားအလှဆင်တေး Download 16. ထာဝရအချစ် Download … Continue Reading →
February 27, 2013 Shanlay အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ချမ်းချမ်း ချမ်ချမ်း Myanmar Single Song Leaveacomment
CHAN CHAN @ Nhyoe Naing Hloon Te Kyanma Chit Thu
Download Link : Multiupload
October 26, 2009 anhp29 အဆိုတော် (မ) ချမ်ချမ်း 1 Comment
ချမ်ချမ်း – မျက်စိမှိတ်အပ်နှံတယ်
၀၁။ ငါနဲ့မင်းနဲ့ ၀၂။ မျက်စိမှိတ်အပ်နှံတယ် ၀၃။ ဗလာ ၀၄။ အဆုံးသတ်ချိန် ၀၅။ မင်းလေးကိုပဲ ၀၆။ ငါ့လောက်မင်းကို ၀၇။ ပြန်လာမဲ့နေ့ ၀၈။ ငါ့အပြစ် ၀၉။ မထင်မိဘူး ၁၀။ ဆူးကင်းသောလက် ၁၁။ ကိုရီးယားရောဂါ ( Bonous Track )
January 27, 2009 ME *MMA* အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ချမ်ချမ်း Myanmar Artist New Myanmar Albums 21 Comments